तपाईंको आजको राशिफल/वि.सं. २०७५ साल असोज १४ गते,आइतबार। | Ekhabar Nepal
तपाईंको आजको राशिफल/वि.सं. २०७५ साल असोज १४ गते,आइतबार।
धार्मिक असोज १४ २०७५ ekhabarnepal
वि.सं. २०७५ साल असोज १४ गते। आइतबार। इश्वी सन् २०१८ सेप्टेम्बर ३० तारिख। नेपाल संवत् ११३८ ञलगा। आश्विन कृष्णपक्ष। तिथि– पञ्चमी,
केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।वचन पुर्याउन नसक्दा व्यवहारमा पछि परिनेछ। सञ्चित रकम खर्च हुनाले अर्थ अभाव सामना गर्नुपर्ला। प्रयत्न गर्दा मिहिनेतले काम बनाउन सकिनेछ। आफ्ना कमजोरीबाट प्रतिस्पर्धीहरूले लाभ उठाउने चेष्टा गर्नेछन्, गोपनीयतामा सजग रहनुहोला।
प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले दु:ख दिनेछन्। नयाँ कामको प्रस्ताव आए पनि साथसाथै चुनौतीसँग जुध्नुपर्नेछ।आफन्तको भरपर्दा काममा पछि पारिनेछ। अध्ययनमा पनि धेरै समय दिन नसकिएला। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। विगतका कमजोरी सच्याउन जुट्नुपर्ला। आगन्तुकले अलमल्याउने हुँदा काम रोकिन सक्छ।
सानो असावधानीले रकम हातबाट बाहिरिन सक्छ। बेहोसीले नोक्सान पुर्याउन सक्छ। घरखर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभावले सताउने हुँदा होसियारीसाथ काममा जुट्नुहोला। आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। नाम र दामका लागि आज गरिएको खर्च व्यर्थ हुने हुँदा सजग रहनुहोला। केही दौडधुप गर्नुपरे पनि पछिका लागि लगानी बढाउने समय छ।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। प्रयत्न गर्दा छोटो समयमै काम बनाउन सकिनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। सहयोगीहरूको साथ पनि जुट्नेछ। मिहिनेत गर्दा लक्ष्यमा पुगिनेछ।
पुरुषार्थी काम प्रारम्भ हुनेछ। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। तारिफयोग्य कामको चर्चा हुनेछ। उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनुका साथै दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने दिगो काममा जग बसाउने अवसर जुट्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा होला।
अवसरका लागि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। परिस्थितिवश अरूका काममा अमूल्य समय बित्नेछ। स्वार्थका लागि साइनो गाँस्नेहरूबाट सजग रहनुहोला। आलस्य गर्ने बानीले उपलब्धि गुम्ने सम्भावना देखिन्छ, सजग रहनुहोला। नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि उपलब्धिका लागि समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला। कामको चाप बढ्नेछ भने वादविवादले मन खिन्न तुल्याउनेछ।
काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति रहनेछ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। रोकिएको काम बनाउन दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। तत्काल ठूलो उपलब्धि प्राप्त नभए पनि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। हुलमुलमा धनमाल जोगाउन सजग रहनुहोला।
मनोरञ्जनमा अलमलिँदा काममा पछि परिनेछ। परिस्थितिवश चिताएको काम सम्पादनमा विलम्ब हुनेछ। कामको मेसो नमिल्दा पनि अलमल हुनेछ। समयको गतिलाई पछ्याउन नसक्दा दुःख पाइनेछ। समय अनुकूल रहे पनि भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउन सक्छ। रमाइलो क्षणमा पनि मन खिन्न रहनेछ। निम्तो प्राप्त भए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्ने देखिन्छ।
लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। परिश्रम परे पनि लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ र पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्, मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। शत्रु र रोगबाट भने सजग रहनुपर्ला।
प्रयत्न गरेका काम सम्पादन हुनेछन्।अरूको भरपर्दा धोका पाइनेछ भने मिहिनेत गर्दा नतिजा सकारात्मक हुनेछ। अभिभावक तथा शुभचिन्तकहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। अध्ययनमा गुरुजनको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा फाइदा हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ। केही चुनौतीहरूसँग जुध्नुपरे पनि अवसरले काममा उत्साह जगाउनेछ।
अनावश्यक साइनो गाँस्नेहरूसँग सावधान रहनुहोला।निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुने समय रहेकाले हतारमा निर्णय नलिनुहोला। हिस्सेदारसँग असमझदारी बढ्नाले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ। नियमित काम सम्पादन भए पनि पारिवारिक मतभेदले व्यवधान निम्त्याउला। बेसुरमा वचन दिने बानीले अप्ठ्यारो पर्ला। स्थायी सम्पत्तिमा विवाद आउन सक्छ।
गरिएका कर्मको छोटो समयमै उचित प्रतिफल पाइनेछ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सफल भइनेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। विशेष उपहार हातलागी होला। कृषिमा कामको चाप र चौपायामा केही समस्या देखिए पनि धन आर्जन प्रशस्तै हुनेछ।